Yimalini iWhisky elungileyo? Kuthekani $ 60,000 ukuba Suntory
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Yimalini iWhisky elungileyo? Kuthekani $ 60,000 ukuba Suntory
I-Yamazaki 55 ngoku iyafumaneka kwi-Global Travel Retail
I-House of Suntory namhlanje yazise inani elilinganiselweyo kakhulu le-Yamazaki 55 yewhisky kwi-Global Travel Retail, efumaneka ngexabiso lentengiso elicetyiswayo le-60,000 ye-USD.
I-Bottled ngo-2020, i-Yamazaki 55 yindlu yakudala ye-Suntory kwimbali yayo kwaye ihlawula imbeko kusapho olusisiseko lwe-whisky yaseJapan, ngelixa ibhiyozela ixesha le-Japan "Showa" lama-1960.
I-Yamazaki 55 iya kufumaneka ukukhetha i-Global Travel Retail kunye neebhotile ezifunyenwe eLondon, eParis, eHainan, eHong Kong, eTaipei, e-Amsterdam, eSeoul, eDelhi, e-Istanbul, e-Dubai naseSingapore.
I-Beam Suntory iya kunikela nge-5,000 yeedola ze-USD kwibhotile nganye ekhutshwe kwingqokelela yebhotile ye-100 yalo nyaka, iyonke i-$ 500,000 USD, kwi-White Oak Initiative, iqela elizinikele ekuzinzeni kwexesha elide lamahlathi e-oki amhlophe aseMelika.
I-Yamazaki 55 yingxubevange yeemalthi ezinqabileyo ezingatshatanga, eziqulathe amacandelo e-distilled ngo-1960 phantsi kweliso lomseki weSuntory uShinjiro Torii kwaye emva koko waba mdala kwi-Casks yaseMizunara; kwaye ngo-1964 phantsi kolawulo lwe-Suntory's Second Master Blender Keizo Saji kwaye emva koko ekhulile kwi-White Oak casks.
Inkosi yeSizukulwana sesiHlanu yeSuntory yeBlender uShinji Fukuyo usebenze ngokusondeleyo noMphathi weSizukulwana sesithathu uShingo Torii ukuhambisa ubugcisa babo bokutyikitya bokudibanisa ukubonisa ngokufanelekileyo ubunzulu obukhethekileyo, ubunzima kunye nobulumko obuyi-Yamazaki 55.
Ulwelo oluphumayo lubonisa umbala we-amber onzulu; ivumba elimnandi elibomvu le-sandal wood kunye neziqhamo ezivuthwe kakuhle; inkalakahla eswiti, ekrakra kancinci; kwaye ikrakra kancinane kodwa imnandi kwaye ityebile.
UManuel González, uMlawuli weNtengiso we-GTR weBeam Suntory, uthe: “Siyazingca kakhulu ngokuba nethuba lokubonelela abahambi into ekhethekileyo kwaye ekhethekileyo njengoYamazaki 55, eyona ntetho indala kwiNdlu yeLanga. Le mveliso yoshicilelo olulinganiselweyo kakhulu iya kuboniswa kwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zeNdlu yaseSuntory, kwaye iya kwandiswa liphulo elidibeneyo lokuvula. Sizibophelele ekukhuliseni ukuthengiswa kweGlobal Travel ngokuqinisa iminikelo yethu entsha kunye nokuzisa owona mgangatho ulungileyo wokuthenga amava kubathengi bethu. "
'I-Yamazaki' ibhalwe kwi-calligraphy kwibhotile nganye yekristale, ngelixa uphawu lobudala lugxininiswe ngothuli lwegolide kwaye lukhuselwe nge-lacquer. Ukuvulwa kwebhotile isongelwe kwiphepha elenziwe ngesandla le-Echizen washi kwaye liboshwe ngentambo ephothiweyo yaseKyo-kumihimo, ubugcisa bemveli obusuka eKyoto. Ibhotile nganye ifakwe kwibhokisi ye-bespoke eyenziwe ngomthi waseJapan waseMizunara kwaye igqunywe ngeSuruga lacquer.